ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်တွေကို လည်ပင်းဖက်ပေါင်းတဲ့ လွင်မိုးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလို့ ပျော်နေတဲ့ခင်လှိုင်… – Shwewiki.com
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသားကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးကတော့ တခေတ်တခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သရဲလေးကောင်နဲ့ အရမ်းကို ခင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သရဲလေးကောင်ဆိုတာနဲ့လွင်မိုးနဲ့တွဲမြင်တဲ့ထိ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို အတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူပါ ။
သရုပ်ဆောင်လွင်မိုးဟာ အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို မာနမထားဘဲ တလေးတစားချစ်ခင်စွာပေါင်းသင်းတတ်တဲ့သူဆိုတာကတော့ အားလုံး သိပြီးဖြစ်မှာပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးခင်လှိုင်က ကျွန်တော်တို့လို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ…ဟာသသရုပ်တွေ လူရွှင်တော်တွေကို..ချစ်လွန်းလို့ ပြောမနာဆိုမနာလည်ပင်းဖက်ပေါင်းတတ်တဲ့…
ညီအကိုအရင်းတွေလိုချစ်ရတဲ့ ဘော်ဒါကြီး ကိုလွင်မိုးနဲ့ဒီနေ့ပြန်ဆုံတွေခဲ့ပြီးစကားတွေရေပက်မဝင်ပြောခဲ့ရတာ …အလွန်ပျော်တယ်ဗျာ…ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် . ချစ်သူငယ်ချင်းကြီး…ဂျိမ်းစဘွန်းရေ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ လွင်မိုးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာကို အလွန်ပျော်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
အနုပညာလောကမှာ အတော်ကြာရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ အတူရိုက်ကူးဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးထားပါသေးတယ် ။
လွင်မိုးနဲ့ ခင်လှိုင်တို့ ကို ချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားႀကီးတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ လြင္မိုးကေတာ့ တေခတ္တခါက လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သရဲေလးေကာင္နဲ႔ အရမ္းကို ခင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သရဲေလးေကာင္ဆိုတာနဲ႔လြင္မိုးနဲ႔တြဲျမင္တဲ့ထိ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို အတူ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့သူပါ ။
သ႐ုပ္ေဆာင္လြင္မိုးဟာ အႏုပညာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို မာနမထားဘဲ တေလးတစားခ်စ္ခင္စြာေပါင္းသင္းတတ္တဲ့သူဆိုတာကေတာ့ အားလုံး သိၿပီးျဖစ္မွာပါ ။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဦးခင္လႈိွုင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြ…ဟာသသ႐ုပ္ေတြ လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြကို..ခ်စ္လြန္းလို႔ ေျပာမနာဆိုမနာလည္ပင္းဖက္ေပါင္းတတ္တဲ့…
ညီအကိုအရင္းေတြလိုခ်စ္ရတဲ့ ေဘာ္ဒါႀကီး ကိုလြင္မိုးနဲ႔ဒီေန႔ျပန္ဆုံေတြခဲ့ၿပီးစကားေတြေရပက္မဝင္ေျပာခဲ့ရတာ …အလြန္ေပ်ာ္တယ္ဗ်ာ…ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ . ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းႀကီး…ဂ်ိမ္းစဘြန္းေရ ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ လြင္မိုးနဲ႔ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရတာကို အလြန္ေပ်ာ္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။
အႏုပညာေလာကမွာ အေတာ္ၾကာရပ္တည္ေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သလို ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ အတူ႐ိုက္ကူးဖူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕တဲ့အမွတ္တရအေနနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ပုံရိပ္ေလးကိုလည္း ပရိသတ္ေတြကို မွ်ေဝေပးထားပါေသးတယ္ ။
လြင္မိုးနဲ႔ ခင္လႈိင္တို႔ ကို ခ်စ္ခင္တဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္လည္း ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။